1. Amin'izao fotoana izao, manana endrika endrika Na tarehy V-chef Na inona na inona fomba fijerinao azy, dia hita amin'ny fironana amin'izao vanim-potoana izao Makà sary tsara tarehy toa an'i Pangpuri Toy ny superstar Nofinofin'ireo tanora izany Betsaka ny olona miatrika ny olan'ny tarehy mivonto. Fantatra amin'ny anarana hoe "tarehy lehibe" koa izay niteraka ahiahy Na ihomehezana ny olona sasany mba tsy hatoky tena intsony amin'ny fakana sary na fiainana Androany dia manana torohevitra tsara izahay hanampy anao hanana endrika tarehy tsara tarehy sy ny fomba fihenan'ny lanjan'ny tarehy izay manome antoka fa afaka manao izany ny olona rehetra na dia sarotra aza izany.
2. Manaova fanazaran-tena tsy tapaka amin'ny hozatra amin'ny tarehy, fanazaran-tena mora afaka mandritra ny andro. Na alohan'ny hatory mandritra ny fotoana ilana fialan-tsasatra Zava-dehibe toy ny fomba very lanja tarehy. Vitanao irery izany. Misy dingana tsotra:
3. Atombohy amin'ny fametrahana moramora ny felatanana amin'ireo tempoly roa. Afatory mafy ny nify aorian'izay mba hasiaka ny valanoranony. Tsindrio ny felatananao mba hanodinana ny tempoly ho fihetsiketsehana boribory 3 moramora sy am-pilaminana hahatsapana ho miala sasatra ny hozatra.
4. Tohizo amin'ny paozy faharoa Atombohy amin'ny fametrahana moramora ny fanondro, afovoany ary peratra ny rantsan-tànana amin'ny lafiny roa amin'ny takolantsika. Avy eo mitsiky moramora tokoa, tsindrio moramora eo amin'ny tampon-takolaka ny rantsan-tànana telo, hazony mandritra ny 5 segondra, ary avereno im-10 indray.
5. Aleo hotohizana amin'ny laharana fahatelo. Sarony amin'ny tanana manjaka ny vava Avy eo ataovy hovozongozona ny takolaka Avy eo afindra amin'ny takolaka ankavia ny rivotra ao am-bavanao. Mikisaha amin'ny takolaka ankavanana, manao fihodinana 10, miala sasatra.
6. Ny toerana farany dia ny mitsentsitra ny takolanao roa amin'ny vavanao ary mitazona ny vavanao mandritra ny 5 segondra. Miverina mandroso sy miverina 10 amin'ny toerana tsirairay ny Do 10 ankoatry ny mora atao. Ary tsy misy fitaovana sarotra Raha atao tsy tapaka Manampy amin'ny fampihenana ny tavy manodidina ny tarehy koa Ahenao ny tarehy matavy, miova ho hozatra, miendrika refy amin'ny fomba tsotra.
7. Misotroa rano bebe kokoa Ampy hahitana izay ilain'ny vatana, ilaina ny rano ho fomba iray hampihena ny lanjan'ny tarehy. Satria mamelombelona Ampio ny rafi-pandevonan-kanina Ary tazomy ho madio sy hiasa ara-dalàna ny sela isaky ny faritra amin'ny vatana Betsaka ny olona tsy mahazo an'izany Misotro rano be Mety hiteraka edema amin'ny tarehy sy vatana Izay raha ny marina Misotro rano madio 6 ka hatramin'ny 8 vera isan'andro, indrindra alohan'ny hisakafoanana an-tanana. Atsangano rano fisotro iray vera feno Ho fanampin'ny fanampiana anao hihena Vatana mamelombelona Mihinana sakafo kely kokoa Misy fiantraikany amin'ny freshness an'ny vatana koa
8. Ahenao ny fisotroanao zava-pisotro mahamamo sy zava-pisotro misy alikaola. Ny filan'ny antoko dia mila mandamina ny fiainany Te hanana tarehy tsara tarehy Satria ny alikaola no manala ny vatana Ary miteraka fivontosan'ny tarehy Mandra-pahazava ny hoditra, misotroa kely, fa mankafy ny rivotra iainana. Ho an'ny fahasalamana tsara dia mangatsiaka kokoa
9. Mikarakara sakafo sy miala sasatra. Ambonin'izany rehetra izany fa tsy ny fomba fihenan'ny lanjan'ny tarehy Misafidy sakafo misy fibre Ary tena ilaina ny proteinina tsara. Manampy vitamina avy amin'ny voankazo mahasalama toy ny paoma, guava na voankazo misy siramamy kely. Zava-dehibe ny fananana fitsaharana ampy. Tsara ho an'ny hoditrao sy ny fahasalamanao izany. Ary miaina miaraka amin'ny fahatakarana an'izao tontolo izao Ampiasao hery foana ny tenanao. Tsy dia sarotra izany, mifantoka fotsiny ary mitandrema amin'ny fiainanao. Miezaha hitondra fomba tsotra momba ny fihenan-danja amin'ny tarehy izay ampirisihinay ho hitanay. Fa manana tarehy sy tarehy mamirapiratra